ဗြိတိသျှကောင်စီမှ General English နှင့် IELTS Preparation တန်းခွဲသစ်များအတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေနိုင်ပြီ - Myanmar Network
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ General English နှင့် IELTS Preparation တန်းခွဲသစ်များအတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေနိုင်ပြီ
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 24, 2016 at 17:30 in ကြေငြာချက်၊ အကြံပြုချက် နှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်း (Announcement, Comments & Help)
တန်းခွဲသစ်များကို ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်မှ မတ်လ ၁၇ ရက် အထိ ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်မှ (၁၁) ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက် မည်သူမဆို သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (သို့) အိမ်ထောင်စုစာရင်း/မွေးစာရင်းမူရင်းများ ယူဆောင်၍ တနင်္လာမှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၄:၃ဝ) အတွင်း လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲများပြုလုပ်မည့် ရက်များ - နိုဝင်ဘာ (၁) ရက်မှ (၁၁) ရက်အထိ (တနင်္လာ မှ သောကြာ)
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကြေး - မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၅,၀၀၀
General English (60 hours) > အသက် (၁၈) နှင့်အထက် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ကျပ် ၄ဝဝ,၀၀၀ နှင့် (၁၈) နှစ်အောက် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ကျပ် ၄၅ဝ,၀၀၀
IELTS Academic (60 hours) > ကျပ် ၄၅ဝ,၀၀၀
IELTS Express (30 hours) > ကျပ် ၂၄ဝ,ဝဝဝ
*** ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုပြီးလျှင် သင်တန်းတက်ရောက်ရန်မှာ ရရှိသော Level နှင့် တက်ရောက်လိုသောအချိန်တွင် အတန်းနေရာရှိမှသာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် (၄)မျိုးစလုံး ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ဗြိတိသျှကောင်စီမှ နိုင်ငံတစ်ကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများမှ ခေတ်မီသင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများစွာဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိလိုပါက www.britishcouncil.org.mm/my/english (မြန်မာဘာသာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ) နှင့် www.britishcouncil.org.mm/english (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ) တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤ online formahref="http://www.surveymonkey.com/r/general-jan17">www.surveymonkey.com/r/general-jan17 > ကိုဖြည့်၍ အချက်အလက်များပေးခဲ့ပါက မိတ်ဆွေထံပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရာတွင် စာကြည့်တိုက် အသင်းဝင်ကဒ်ပြား၊ သင်တန်းဌာန ကျောင်းသားကဒ်/မိဘကဒ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စသည့် ကဒ်ပြား တစ်ခုခုအား ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကဒ်ပြား တစ်ခုခုပါရှိခြင်းမရှိပါက အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Placement Testing for General English and IELTS English Classes
Nearest classes are opening from7Jan to 17 Mar 2017.Placement tests for students aged 16 and above will be conducted from 1st to 11 Nov 2016. Please come to British Council Yangon (78, Kanna Road) between 8.30 a.m. and 4.30 p.m. (Monday to Friday) with NRC, birth certificate or passport to register for the test. Places are limited and registration are accepted onafirst come, first served basis.
Placement test fees - K 15,000
General English (60 hours) > K 400,000 for students aged 18 and above, K 450,000 for students under 18
IELTS Academic (60 hours) > K 450,000
IELTS Express (30 hours) > K 240,000
***Course registration is depending on student’s level and class availability.
For more information, please leaveamessage on this call back form http://bit.ly/bc-call-back and we will call you back by phone.
Visitors should bringaphoto ID (NRC or passport) for security check as we are located in the British Embassy building.